Home News Dowlada Yahuuda oo Gadaal ka Riixeeysa Qorshaha Abiy Ahmed
Abiy ahmed waxa uu dhashay August 15, 1976 waa 41 jir ku dhashay beshasha degmada cakaaro,Waxa uu diinta islaamka ka baxay 17 sano asigoo jira waxuu qaatay diinta kirishtaanka.
Waxaa uu ka tirsanaa sirdoonka itoobiya Waxaa uuna 3 sano koorso ku soo qaatay dalka israaiil Sara u qaadista habka sirdoonka iyo xiriika dadweynaha waxaa siiayay sirdoonka israaiil ee mosad.
In uu soo baxa waxaa ka danbeeyay israil Heshiishka itoobiya iyo eritareeya waxaa soo dadajiyay reer galbeedka,2 masuul waxa ay is dhaafsadeen kutaabka beebalka oo Aaminaad laga wado.
Wadanka somaliya ayay ku tilmaameen in ay suura galtahay in uu hagaago. Kheeyraadkiisana ay la wareegaan Dalal halis ku ah danaha reer galbeedka
UN. Waxa ay Qorsheeyeen 20 sano ee soosocota in ciidanka itoobiya sii joogaan soomaaliya,Ciidankii itoobiya ee xuduuda eratareeya .waxaa Loo soo rarayaa xuduudaha soomaliya. Raacii koowaad ay yimaadeen wajaale.
Abey ahmed waa cadawga soomaaliya Waxa uu wataa xirfad maskaxeed oo halis ah Waxa uu ku shaqeeyn doonaa Qorshaha loo yaqaan 2 Aflaha.
Abye Ahmed wuxuu shacabkiisa ugu laab qaboojiyay in dhawaan Somalia ee la midoobi doonto itoobiya si shuruud la aan ah
Dhanka kale dowlada Somalia ayaa u saxiixday itoobiya in 4 ka mida Dakadaha Somalia ee maal gashato itoobiya balse kama eesan fikirin
Dowlada Somalia ineesan awoodin ilalinta dakadaha lagu wareejiyay itoobiya wexee dhisatay ciidamo xoog leh oo ka hool gali doono xeebaha Somalia
Si kasta ha ahaate dowlada itoobiya ayaa isku dayeesa sidee ku qabsan laheed guud ahaan dhulka Somalida xurta ah waxana u surta galin doona kuwa iska dhigaya wadaniyiin balse qalbiga ka jecel Amxaarada doonaya in kursiga oo ku fadhiyo Amxaarku u waardiyeeyo
Qorshihii dhicisoobay ee Males zanaawi waxaa dib usoo cusboonesiiyay Abye Ahmed oo ka mid xisbigii Malaz zanawigii Baqtiyay
Previous articleSaadaq Joon oo Xil ka qaadis lagu Sameeynaayo Iyo Kheeyre oo Ina Adeerkiis xilkaasi la rabo!!
Next articleMaamulka Koonfur Galbeed Oo u hanjabtay Siyaasiyiinta ku sugan deeganadeeda
Siyaasi Muqtaar”Carabeey asiga ayaa duminayo Galmudug oo bil walbo lacag ka...
Kulan Xasaasi ah oo Berbera ku dhex-maray Seylaci iyo odayaal ka...